रवि लामिछानेले किन भेट्दै छन् पारस शाह संग? – Sidha Post 24
रवि लामिछानेले किन भेट्दै छन् पारस शाह संग?
काठमाडौं : तेह्र वर्ष अगाडि राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएपछि नागरिक भएका ज्ञानेन्द्र शाह र उनका छोरा पारस शाह बेला मौ’कामा चर्चामा आइरहन्छन् । पारस शाह त कहिले बैंककमा क’न्निका नामक युवतीसँगको रोमा न्सका कारण चर्चामा आएका थिए भने पछि तिनै युवतीबाट छु’टकारा पाउन उनलाई हम्मेहम्मे परेको समाचार पनि आयो ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
पछिल्ला दिनमा पोखरामा सोनिका रोकाय नामक युवतीसँग उनको अफेयर पनि निकै भाइरल बन्यो । सोनिकासँगको अ’फेयरपछि पारस बेलाबेलामा पोखरा गइरहन्छन् । हि’न्दू राज्य सहितको राजा राख्नुपर्ने परिकल्पनाकार कमल थापाहरु समेत पारसका यी गति विधि र हु’लिया देखेर वा’क्कदिक्क हुने गरेका छन् । केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा वि’घटन गरेपछि राजावादीहरु यसलाई स्वर्ण मौकाका रुपमा उपयोग गर्दै हिन्दूराज्य र राजा फर्काउने दिवा सपना देखिरहेका छन् ।
ज्ञानेन्द्र र पारस पनि पछिल्ला दिनमा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि गणतन्त्र धरापमा परेकाले पुनः सिंहासन प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आशामा सुषुप्त गतिविधि गरिरहेका छन् । पारस शाहले करिब १२ दिन अगाडि पोखरामा चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने लगायतसँग वार्ता गरेका छन् । पोखराको वैदाम लेकसाइड स्थित एक रेस्टुरेन्टमा भएको उक्त वार्तामा के कुराकानी भए भन्ने कुरा चाहिं थाहा हुन सकेको छैन ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
तर उक्त रेस्टुरेन्टको एक हल सुरुमा चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेको टोलीबाट बुक भएको थियो ।त्यसको केही बेरपछि उक्त रेस्टुरेन्टमा सोही हल पारस शाहका सु’रक्षा कर्मीले मागेपछि सञ्चालक अ’प्ठेरोमा परे । उनले पत्रकार रवि लामिछानेलाई त्यो हल दिइ सकेकाले दिन असमर्थता जनाए । पारसका सुरक्षाकर्मीले रवि लामिछानेसँग नै भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको भनेपछि रेस्टुरेन्ट सञ्चालक पारसको टोलीको सम्भावित त्रा’सबाट मुक्त भए ।
पत्रकार लामिछानेले पहिले नै उक्त हल बुक गरेको जानकारी गराए । स्रोतका अनुसार, साँझ पख पारस शाह र रवि लामिछाने बिच करिब १ घण्टा वान टु वान वार्ता भएको थियो । तर रवि लामिछानेले सुरुमा पारस शाहसँग पोखरामा भेट भएको कुरा स्वीकार्न मानेनन् । पछि रेस्टुरेन्टमा भेट भएको हो तर वान टु वान वार्ता भएको होइन भन्ने दावी गरे । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
स्कुल मा यी दुई प्रेम जोडिले यस्तो हर्खत गरे पछि भिडियो भयो भाइरल (हेर्नुहोस भिडियो)
BREAKING : विनयजंग नेपालगञ्जबाटै प:क्राऊ !